I-SYMBOLIC: UMartin Vrijland
Isikhumbuzo se-MH17 ilanga elihle kakhulu elibonayo e-'bbhoni 'eluhlaza'
ahanjiswe I-SYMBOLIC	by UMartin Vrijland	ngo-31 Agasti 2016	• 12 Amazwana
E-Vijfhuizen maduze kuyoba isikhumbuzo sokukhumbula izisulu zenhlekelele ye-MH17. Kuyinto isinyathelo se-National Monument MH17 Foundation. Okushayisayo ngempela ukufanekisa kwetshe lesikhumbuzo. Sithole ilanga elibonayo yonke i-ribbon eluhlaza (ibhande), njengoba kungabonakala kumbono womculi wetshe lesikhumbuzo ngezansi. Ngaphezu kwalokho, [...]
I-Samsung, i-Google, i-Cybernetics nokuhlanganiswa ngokomzimba phakathi komuntu nomshini
ahanjiswe I-SYMBOLIC	by UMartin Vrijland	ngo-30 Agasti 2016	• 1 Comment
I-Cybernetics yizwi elivela ku-Greek κυβερνήτης (ama-kybernētēs, umlingani) futhi yisayensi ephathelene nokulawulwa kwezinhlelo zezinto eziphilayo kanye nemishini ngokusebenzisa impendulo. I-cyborg (ye-English cybernetic organism noma i-cybernetic organism) ukuhlanganiswa ngokomzimba komuntu nomshini. Le migomo iyathakazelisa ukubeka [...]
UDavid Bowie uyafa izinsuku ezingu-2 ngemuva kokuzalwa kwe-69
ahanjiswe I-SYMBOLIC	by UMartin Vrijland	ngo-11 January 2016	• 18 Amazwana
Ezinsukwini ezimbili ngemuva kokuzalwa kwakhe, lo myalezo ubonakala ukuthi umlandeli we-Aleister Crowley odumile uDavid Bowie wafa eneminyaka engu-69 ngemuva kokuvula i-albhamu yakhe entsha ethi 'Blackstar'. Ukufa kukaBuyie kungenzeka kushuswe ngumphakathi. Wayengumculi ohlonishwa kakhulu futhi owaziwayo, uma engekho omkhulu. Lokhu okungenani [...]
Thola incazelo yangempela yeqembu likaKhisimusi
ahanjiswe I-SYMBOLIC	by UMartin Vrijland	ngo-10 December 2015	• 6 Amazwana
Ukuze uthole ukuthi kusho ukuthini ngempela uKhisimusi, kungcono ukumba emlandweni. Iqala ukunyakaza okuncane: Emkhosini wama-Nordic, i-12 yatshiswa izinsuku eziningi esihlahleni esikhulu somuthi lapho izilwane nabantu bahlatshwa khona ngokuhlonipha u-Yule. Isihlahla somuthi sasifanekisela izitho zangasese zesilisa. [...]
Ingabe i-911 i-'Criminal of the century 'eyayibizwa yiSupertramp ku-1979?
ahanjiswe I-SYMBOLIC	by UMartin Vrijland	ngo-19 Okthoba 2015	• 33 Amazwana
Ngempelasonto eledlule nganginomngane emotweni oye wakhathazeka kakhulu yi-band Supertramp, kusukela eminyakeni engu-70. Ngakho lowo mculo wasukuma futhi uthembekile, ngangikuthanda lokho. Esikhathini esedlule ngithole umculo ophoqelela, omsindisayo futhi omnandi. Wangibonisa isembozo se-albhamu ethi 'Breakfast in America' ukusuka ku- [...]
I-Islam iqukethe nokufanekisa kwe-Saturn ingxenye ye-2
ahanjiswe I-SYMBOLIC	by UMartin Vrijland	ngo-30 Septemba 2015	• 14 Amazwana
Izolo ngabeka isihloko engasinikeza umbono wami ekukhoneni okungenzeka kukaSaturn ku-Islam. Lapha kwakugxile kakhulu eKaaba eMecca futhi kuqhathaniswa nesigxobo esenyakatho seSaturn. Lokhu kungase kungabi yiqiniso eliqinile labaningi. Akuyona neze inhloso yami [...]
AmaSulumane nawo aqukethe ukufanekisa kweSaturn
ahanjiswe I-SYMBOLIC	by UMartin Vrijland	ngo-29 Septemba 2015	• 45 Amazwana
Ngenxa yokuthi nginabalandeli abaningi base-Muslim ku-Facebook, ngithola umbuzo wokuthi ngingafaka kanjani ukuthi inkolo ibonakalisa isigaba se-Saturn. Okokuqala, ngifuna ukucacisa ukuthi ngiyahlonipha abantu abakhulu kakhulu ngokholo lwabo. Ngokuvamile bayazibandakanya kakhulu empilweni yabo futhi babe [...]
Ingoma ye-Eagles Ihhotela laseCalifornia likaSathane
ahanjiswe I-SYMBOLIC	by UMartin Vrijland	ngo-21 Septemba 2015	• 10 Amazwana
Wonke umuntu odlala isiginci uye wadlala ingoma okungenani i-1x empilweni yakhe, kodwa mhlawumbe okuningi kakhulu. Yiqiniso futhi liyi-guitar line elihle kakhulu futhi ama-solos engoma ahlukile esikhathini sakhe. Lo mbhalo uhlale ungaqondakali, kodwa ngokuvamile lokho kwenzeka ngomculo owaziwayo [...]
CERN, Shiva, i-Vedas, iSaturn kanye nokubhujiswa okuhleliwe kwesintu
ahanjiswe I-SYMBOLIC	by UMartin Vrijland	ngo-17 Agasti 2015	• 6 Amazwana
Izimpawu emoyeni kusukela ezikhathini zasendulo zichaza le piramidi, 'iso elibona konke' nokuningi
ahanjiswe I-SYMBOLIC	by UMartin Vrijland	ngo-7 April 2015	• 1 Comment
Uyazi yini ukuthi abavubukuli baye bathola ama-mammoths amaqhwa, amanye awo ayesekhona ukudla emlonyeni? Ngifuna ukukhuluma nawe ngaleyo ndlela, ngoba kubonisa ukukhishwa kungazelelwe, ukuze izinsalela zigcinwe kahle kakhulu. Ama-mammoth ahlala ezindaweni ezisenyakatho, lapho kusobala ukuthi kwakungekho ama-ice caps amakhulu, njengathi manje [...]
Ukuvakashelwa okuphelele: 14.067.640
SalmonInClick op UNicky Verstappen uJos Brech umayelana nokwamukela imininingo egciniwe ye-DNA yokuthola i-DNA yakho online
Mindsupply op UNicky Verstappen uJos Brech umayelana nokwamukela imininingo egciniwe ye-DNA yokuthola i-DNA yakho online